आजको तस्वीर : असिना-पानी सँग रमाउदै किशोरी ! – ebaglung.com
आजको तस्वीर : असिना-पानी सँग रमाउदै किशोरी !
२०७४ चैत्र २७, मंगलवार १८:५१	Top News, अन्य समाचार
निर्मल पौडेल, पर्वत २०७४ चैत २७ । केहि दिन यता मौसम चिसिएको छ । वर्षा भैरहेकाले पनि चिसोपन बढेको विश्वास गरिएको छ । आकाशमा गड्याङ् गुडुङ गर्ने, हावाहुरी चल्ने, असिना पानी पर्ने मौसम पनि यहि हो । र यस मौसममा आगलागीका घटनाहरु हुने हुनाले विशेष सतर्कता अपनाउदै आएका हुन्छन स्थानीयहरु ।
गर्मीयाममा वर्षा हुनाले शरीरमा स्फूर्ति ल्याउछ । असिना-पानी पर्दा खासगरी युवा पीढीलाई निकै रमाईलो लाग्छ र असिना सँगै खेल्न आकर्षित गरेको हुन्छ । बुढा पाका किसानी जीवनमा रमानउनेहरुलाई भने असिनाले खासगरी सुन्तला, आँप, लिची आदि जातिका फलफुलका फुल (मन्जरी), फल झार्ने र पाकेको बालिनाली, सागसब्जीमा क्षेती पुराउने हुँदा चिन्तामा पार्छ ।
यस्तै हिँजो सोमबार पर्वत जिल्लाको राम्जा देउरालीमा पानीसँगै असिना परेपछी स्थानीय युवा र बालबालिकाहरु निकै रमाईलो संग असिनासंग खेले । हिमाली क्षेत्रमा हिउँसंग खेल्ने र बेसीमा असिनासँग खेल्न रमाईलै हुन्छ । राम्जा देउरालीका किशारीहरु जोश र उन्मादका बीच भुर्इँमा विस्कुन बनेको असिनालाई हातमा लिएर आकाश तिर फाल्दै प्रकृतिको यो मनोहरताको स्वाद लिईरहेका छन् ।
रु ८ लाख ५० हजारको लागतमा मल्ममा पर्यटन पदमार्ग निर्माण सुरु
प्रवास : सापकोटा झोक्किए पछि तातोपानी नाका खुलाउन पहल !
२०७६ पुष २५, शुक्रबार ०७:४१
कुस्मा पकुवामा समुदाय प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम : समाजमा अपराधको मुख्य कारण जनचेतानाको अभाव- प्रजिअ नेपाल